China Scraper, antsy putty, tahony hazo, tantely plastika, spatula, ozinina putty vy putty ary mpanamboatra | Boda
Scraper, antsy putty, tahony hazo, tantana plastika, spatula, antsy vy putty
1. Ny antsy putty dia toy ny karazana "fitaovana manerantany Bai", izay matetika ampiasaina amin'ny fanesorana, angady, fandokoana ary famenoana. Ny fikikisana dia manondro ny fampiasana Dao hanesorana ireo loto ao amin'ny rindrina, hanala ny tanimanga, na putty; angady, izany hoe ny antsy putty dia azo ampiasaina handefasana ny hoditry ny rindrina, simenitra, putty sns; coating, azo ampiasaina hametahana putty; mameno, azo ampiasaina hamenoana ny triatra sy triatra amin'ny rindrina. Ho fanampin'izany, dia azo ampiasaina miaraka amin'ny vovoka hampifangaro putty. Ireo fiasa ireo dia afaka manampy amin'ny haingon-trano, ary ho tonga fitaovana ilaina.
2. Amin'ny fiainantsika andavan'andro, ny antsy putty dia misy fampiasa betsaka. Ohatra, rehefa manao pancakes dia azonao atao ny mampiasa antsy maranitra hanaparitahana ireo atody miparitaka ary hampifangaroina mitovy amin'ny hoditry ny mofomamy mba hanaovana tsakitsaky matsiro; ohatra, rehefa miatrika ny «moss cowide» ny arabe an-tanàn-dehibe ny mpiasa manadio dia afaka mampiasa antsy maranitra hamaranana ny asa fanadiovana; , ohatra, rehefa manadio loto taloha ao an-trano dia azo ampiasaina hanadiovana tsara ny antsy.
3. Raha ny tena izy, ny antsy putty dia mazàna vita amin'ny vy vy sy tantera-kazo na plastika. Izy io dia karazan-java-mavitrika manampy loko matetika ampiasaina amin'ny haingon-trano. Fitaovana tanana matetika ampiasain'ny mpanao hosodoko. Mora ampiasaina izy io ary azo ampiasaina betsaka amin'ny fanamboarana sy ny fiainana.
Amin'ny ankapobeny, antsy vy putty, angady, taratasy vita amin'ny rindrina, fitaovana fanadiovana antsy an-trano. Miraikitra matevina, fitaratra poloney fitaratra, tsara tarehy sy malala-tanana, anti-harafesina. Ny antsy vy putty dia manana elastika tsara ary tsy mora miondrika.
Ny tranom-paty antsy dia vita amin'ny vy karbonika, vy manganese ary vy tsy misy fangarony. Izy io dia vita amin'ny fitaovana mitovy amin'ilay antsy putty ary misy ny vatana sy ny tahony. Ny tranom-borona dia manana vodi-nifify (nify misy nify maranitra, toradroa sy mitokana) ary ny sisiny fisaka. Ny fepetra voafaritra mahazatra amin'ny antsy putty dia 1 "＼ 1.5" ＼ 2 "＼ 2.5" ＼ 3 "＼ 4" ＼ 5 "＼ 6". Ny antsy putty dia mizara ho sokajy roa: vy vy sy vy tsy misy fangarony, miaraka amina hazo sy tantana plastika.
Previous: Hety, hety pvc, hety pvc, hety fantsom-drano, hety sampana voankazo, hety tin
Manaraka: Fitaovana fisie vy, fisie vy, napetraka ho rakitra vy mafy
Pipe wrench, mavesatra paompy plastika wrench, adj ...
Hexagon wrench, lohany hexagon wrench, boaty h ...
Haavo, haavon'ny magnétika, haavon'ny aliminioma, firaka lev ...
Hety, hety PVC, fanapahana PVC, fantson-drano ...
Fitaovana vy, rakitra vy, vy mafy nohamafis ...
Rindrambaiko misy tanjona roa, ratchet wrench misy tanjona roa ...